Iitattoos zebhendi yomtshato yothando kunye neyoqobo | Ukwenza umvambo
Iitattoos zebhendi yomtshato yothando kunye neyokuqala
Nat Cherry | | Izinto kunye neeTattoos zezinto
I tattoos zomtshato yenye yeendlela zothando zokwenza ubudlelwane bakho bube sesikweni. Ukongeza, zininzi kakhulu kunokuba zibonakala, kuba, nangona iyindawo encinci kakhulu, ixhasa amathuba amaninzi.
Kule nqaku siza kukuxelela izinto ezininzi ezinxulumene ne-tattoos yebhendi yomtshato, kwaye siya kukunika iingcebiso malunga nendlela yokuvakalisa uthando lwakho ukuze iqabane lakho lifumane ingcamango ngoncumo ukusuka endlebeni ukuya endlebeni kunye neenyembezi ezimbalwa zovakalelo. Ukongeza, sincoma ukuba ufunde enye iposi malunga nokuqokelela iitattoos zeringi, zithambile kwaye zintle.
1 Luhle kangakanani uthando: iingcebiso zokuzivakalisa nge tattoo
2 Imibono ngendandatho yomtshato tattoos
2.1 IiTattoos zentsimbi
2.1.1 Iringi kunye nesimboli yakho
2.1.2 Amakhonkco eHenna
2.1.3 Amakhonkco eGeek
2.2 I-tattoos yokuzibandakanya ngaphandle kwamakhonkco
2.2.1 Ii-ankile kwiminwe
2.2.2 Iidayimani ezincinci
2.2.3 Izithsaba zakhe naye
3 Iifoto zamakhonkco omtshato tattoos
Luhle kangakanani uthando: iingcebiso zokuzivakalisa nge tattoo
Ngoko ke, uya kuzivakalisa, kwaye awusayi kuyenza kakade, kunye nendandatho elula kwiglasi ye-champagne, akukho: unqume ukubeka inki phakathi! Eyona nto intle, kodwa ayibuhlungu ukugcina iingcebiso ezimbalwa engqondweni:
Thetha ngayo nomzobi we tattoo kuqala. Mxelele umbono wakho, into ocinga ukuba iqabane lakho lifuna, kwaye umxelele xa iqabane lakho liza kubona uyilo lokugqibela. Vumelana naye ukuba unokwenza utshintsho okanye kuya kwenzeka ntoni ukuba iqabane lakho alizange lithande ukuyila.
Ngexesha le Yenza idinga le tattoo, uthathele ingqalelo umsebenzi weqabane lakho okanye iiyure zokufunda ukuqinisekisa ukuba iya kufumaneka.
Cacisa ukuba, ngenxa yendawo apho tattoo iya kuba khona, kunokwenzeka ukuba ekuhambeni kwexesha ilahlekelwe ngamandla kwaye nokuba icinywe. Xelela iqabane lakho ngayo, ukuba abakayazi, mhla wazichaza ngokwakho.
Yenza le ngxelo ngokungathi ingumsesane wokwenene. Ukuhlawulela into yokuba akuyi kubakho litye kwibhokisi, beka, umzekelo, ikhadi le-tattooist okanye isampuli encinci yoyilo, nangona into enothando kakhulu kukuba uhambe ngosuku olufanayo oye wazichaza ngalo. inokwenzeka ukuba ekugqibeleni ayisiyiyo loo nto . Enye ingcamango epholileyo kakhulu kukwenza tattoo yesikhashana kwimilo yendandatho kwaye umnike ukuba agqoke kude kube yimini ofumana ngayo tattoo ngokwenene.
Kwaye okokugqibela kodwa okungancinci: okuhle kodwa!
Imibono ngendandatho yomtshato tattoos
Iitattoos zomsesane womtshato zisemthethweni kwaye zisisibhengezo esimangalisayo nesimangalisayo sothando.Nangona kunjalo, ungafuna ukuphuma kancinci okanye unqwenele into yakudala… Siza kukunika iitoni zezimvo!
I-tattoos yebhendi yomtshato apho i-protagonists ziyindandatho, ngaphandle kwamathandabuzo, zezona ziqhelekileyo., nangona unako ukubanika i-twist yokuqala.
Iringi kunye nesimboli yakho
Ekubeni unomfelandawonye njenge-protagonist, unokwenza umzimba weringi yinto oyaziyo kuphela. Ngokomzekelo, uphawu olungolwakho nje, umda omncinci okanye iileta kunye nemihla ngendlela yamakhonkco ezinye iingcamango onokuphefumlelwa ngazo.
Olunye uyilo olupholileyo kakhulu xa kuziwa ekuphefumlelweyo kwe tattoo kunye nomanyano yimida ye-henna-style. Basenokuxelisa indalo okanye ungaya kuyilo oluntsonkothileyo, apho imigca kunye neziqu zixutywe, njengesithombeni, ukuba unqwenela i tattoo enkulu.
Kukho amakhonkco amaninzi apho unokuphefumlelwa khona ukuze umanyano lwakho lube lolona lungaqhelekanga yomnyele. Phakathi kwezona zidumileyo, ukongeza kwiringi yeFlash evela kwifoto, yiRingi enye ye INkosi yamasongo, amakhonkco aluhlaza natyheli ye IziKronike zaseNarnia, ikhonkco labaqingqi bamatye bakaHomere okanye kwanomsesane we Uthixo.
I-tattoos yokuzibandakanya ngaphandle kwamakhonkco
IiTattoos zolu hlobo nazo Banokuba nezinye izinto ezingezozangqa njengabalinganiswa, kodwa loo nto ibekwe kuloo ndawo, okanye ngenxa yentsingiselo yayo, inxulumene nezivumelwano nomtshato.
Enye yezona ndlela zibalaseleyo kunye nezicacileyo zokubonisa uthando lwakho kwiqabane lakho kukwenza tattoo yeankile emnweni wakho. Akungabazeki ukuba intsingiselo, igxininiswe komnye nomnye, icacile ngokujonga, ngakumbi ukuba ukhetha ukufumana tattoo kwindandatho yakho yomnwe. Ii-ankile zikwaluyilo olulula olusebenza kakuhle kakhulu kwizimbo ezifana nemveli.
Ukuba uyayithanda idayimani kodwa awukwazi ukuyifikelela, okanye uyayithanda nje imilo yejometri, okanye ufuna nje ukukhwaza kwihlabathi ukuba ubambene, akukho nto ifana nokufumana idayimani imvambo kumnwe wakho womsesane. Ukuba ufuna ukuyichukumisa ngakumbi, faka iiinishiyali zeqabane lakho.
Izithsaba zakhe naye
Sigqiba ngolunye uyilo lwantlandlolo olubhekiselele ebukhosini, othi kwinto nganye ibe ngukumkani okanye ukumkanikazi wendlu yabo. Ngesi sizathu, phakathi kwezibini ezitshatileyo kuyinto eqhelekileyo ukukhetha uyilo olunomdla kodwa olucacileyo: isithsaba. Unokude uye kuyilo olufana kakhulu ukuze utshatise, kwaye udlale ngamakhadi e-poker kancinci kwaye ukhethe ukongeza umbala omncinci kuyilo lokugqibela.
Siyathemba ukuba sikunike izimvo ezininzi ngexesha elibalulekileyo lokuza ngaphambili kwaye xa kufuneka uthathe isigqibo kuyilo. Sixelele, ngaba uza kuzibhengeza ngalo naluphi na olu yilo okanye uza kukhetha into eyahlukileyo? Sele uyenzile? Njengoko kwakunjalo?
Iifoto zamakhonkco omtshato tattoos
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Izinto kunye neeTattoos zezinto » Iitattoos zebhendi yomtshato yothando kunye neyokuqala